LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Jurassic World T. rex ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ
31 / 08 / 2021 31 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 446 Views စာ0မှတ်ချက် 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း, Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T-rex, 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ, .ရာဝတီ, ပထမဦးစွာမျှော်, Jurassic World, Lego, Lego Jurassic World, YouTube ကို
ပထမဆုံးရုပ်ကြွင်းကိုအဓိကထားကြည့်သည် Lego Jurassic World ၂၀၂၁ အစုံသည်၎င်း၏တရားဝင်ဖြန့်ချိမှုမတိုင်မီအစပိုင်းတွေ့ရှိမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်သည်။
နောက်ထပ်လာတော့မယ် Lego မော်ဒယ်အား၎င်း၏မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်မီတွေ့ရှိခဲ့သည် Lego YouTuber တ ကျောက်စိမ်း အတွက်ပထမဆုံးသုံးသပ်ချက်အဖြစ် 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။
၏အတော်များများက Lego Jurassic World ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ပွဲ ဦး ထွက်ပွဲစဉ်မှ အစပြု၍ ဒိုင်နိုဆောများနှင့်မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုနှင့်ပဋိပက္ခများကိုအာရုံစိုက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံခေတ်တစ်ခေတ်မတိုင်မီထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အပြောင်းအလဲအားလုံးဖြစ်သည် 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ လုပ်ဆောင်ချက်သည်၎င်းထက်များစွာပိုနည်းသည် Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ဘတ်ဂျက်အဆင်ပြေသော T. rex အရိုးစုသို့သူတို့၏အာရုံကိုလှည့်စားသည်။
သုံးသပ်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသီးသန့် ဦး ခေါင်းဒီဇိုင်းသည်မျက်စိနှင့်အရေပြားမပါဘဲမြင်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအရိုးများနှင့်ပြည့်စုံသောရုပ်ကြွင်း၏ ဦး ခေါင်းကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ဒိုင်နိုဆောသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များအတွက်ပိုကြီးသောအပိုင်းအစများကိုသုံးခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဤ T. rex သည်တည်ဆောက်မှုများတွင်တွေ့ရသောပုံမှန်သက်ရှိမျိုးစိတ်များထက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T. rex.
display stand နှင့် plaque ကိုအနီးကပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြပွဲသို့ဧည့်သည်များသည်သူတို့၏သားရဲသည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုမြင်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ ရင်သွေးငယ် Triceratops နှင့် minifigures နှစ်ခုကဲ့သို့ Darius မှပါဝင်သည် Cretaceous စခန်း.
Ashnflash က“ ရိုးသားစွာနဲ့သူတို့ကဒီ့ထက်ပိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆက်လုပ်နေ ဦး မယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ထဲကတစ်ခုစီကိုငါရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ "အနာဂတ်မှာ Triceratops တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Triceratops တစ်ခုကအရမ်းကောင်းတဲ့ဒါမှမဟုတ် Indominous Rex တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ "
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အနည်းဆုံးအဲဒီဆန္ဒတွေထဲကတစ်ခုလောက်ကိုအဖြေပေးခဲ့ပေမည် Lego Ideas 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတစ်ဦးဖြစ်သော နှိုင်းယှဉ်နည်း လိုင်စင်ရသူသို့ Lego Jurassic World 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲစက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ပြသမည့်
← စက်တင်ဘာလ၌ LEGO စတိုးဆိုင်များအတွက်နောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကြေငြာခဲ့သည်
ဒီ Lego Creator Expert set သည် Harley Davidson ပထမဆုံးမဟုတ်ပါ →